Dagaal iyo Duqeyn lagu qaaday Saldhig ciidan oo ku yaala Galgala. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaal iyo Duqeyn lagu qaaday Saldhig ciidan oo ku yaala Galgala.
On Jul 8, 2020 341 0
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala buuraha Goolis ayaa weeraro xoogan ku qaaday saldhig ciidamada maamulka Puntland ku leeyihiin deegaanka Galgala ee hoos yimaada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Guutooyinka Madaafiicda ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qoriga hoobiyaha ku duqeeyey xerada ciidamada maamulka Puntland ee deegaanka Galgala, waxaana in muda ah ku socotay duqeyn culus.
Duqeynta waxaa dhinac socday dagaal xoogan oo ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada maamulka Puntland.
Silsiladda buuraha Goolis, waxaa ka howlgala jabhad katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo dagaal adag kula jirta shirkadaha Shisheeyaha ee ay reer galbeedka ka howlgeliyeen wuqooyi bari, sirdoonnada Shisheeyaha iyo maamulka Puntland ee gacan saarka dhow la leh Xabashida.